Dowladda Qatar iyo Ururka OIC oo si kulul u cambaareeyay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho iyo Baydhabo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dowladda Qatar iyo Ururka OIC oo si kulul u cambaareeyay qaraxyadii ka...
Dowladda Qatar iyo Ururka OIC oo si kulul u cambaareeyay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho iyo Baydhabo
Muqdisho (Halqaran.com) – War-murtiyeed kasoo baxay Wasaaradda arrimaha dibedda ee Dalka Qatar ayaa lagu cambaareeyay qaraxii khasaaraha geystay oo ay Al-Shabaab Sabtidii Shalay ka geysteen Magaalada Muqdisho.
Dowladda Qadar ayaa tacsi u dirtay Dowladda Soomaaliya iyo Ehelada Dadkii ku waxyeeloobay qaraxa, iyadoo Dadkii ku dhaawacmayna Alle ugu rajeysay inuu bogsiiyo.
Xukuumadda Doxa ayaa sheegtay in ay Dowladda Federaalka Soomaaliya la garab taagan tahay taageera kasta oo lagaga hortagayo weerarada Al-Shabaab.
Dhinaca kale, Ururka iskaashiga Islaamka ee OIC ayaa sidoo kale si kulul u dhaleeceeyay qaraxyadii ay Al-Shabaab ay Sabtidii shalay ka geysteen Magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, kuwaas oo ay waxyeello kasoo gaartay Dad isugu jira Rayid iyo Ciidan.
Ururka OIC ayaa dhambaal tacsi ah u diray Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan ehellada iyo Qoysaska Dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadaas, wuxuuna u rajeeyay inuu Alle u booga dhayo Dadka dhaawaca ah.
Ururka OIC ayaa ku celceliyay cambaaraynta iyo diidmada adag ee ku aadan kooxaha qaraxyada, wuxuuna ku dhowaaqay in ay Dowladda Soomaaliya la garab taagan yihiin mar walba taageero kasta oo lagaga hor-tagayo falalka ay geystaan Al-Shabaab.
Ururka Iskaashiga Islaamka OIC